एनआरएन अमेरिकाको विवाद थप जटिल बनाउदै सोनाम लामा « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
एनआरएन अमेरिकाको विवाद थप जटिल बनाउदै सोनाम लामा
२७ जेष्ठ २०७२, बुधबार २३:१४ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २८ जेठ । गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिको विवाद थप चुलिएको छ । संघको विवादका सम्बन्धमा रिपोट संकलन गरी केन्द्रमा पठाउन अमेरिका क्षेत्रीय संयोजक सोनाम लामालाई अधिकार दिइएको थियो । संयोजक लामाले चुनावमा धाँधली भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । यो उनलाई दिइएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निष्कर्ष निकालेको कतिपयको बुझाइ छ ।
सामान्यतय यस्ता छानविन गोप्य हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । तर यो मान्यता विपरित लामाले ब्यक्तिगत विवरणसमेत सार्वजानिक गरेका छन् । लामाले ‘मंगलवार जारी गरेको बक्तब्यमा एउटै आईपीबाट ६ वटाभन्दा धेरै मतदान भएका कागजात समेटिएका छन् । ६ वटा भन्दा धेरै मतपत्र एउटै खामभित्र आएको सन्दर्भमा त्यस्ता मतपत्रहरु रद्द गरिएको थियो । त्यस्ता मत गणना गरिएको थिएन । तर एउटै आईपीबाट ६ वटाभन्दा धेरै मतदान भएका र त्यसलाई मान्यता दिइएका कागजातहरु उजुरीकर्ताले पेश गरेका छन्’ भनी गोपनीयतासमेत भङ्ग गरिएको छ ।
उनले एउटै क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी ६ सय २३ जनालाई एनआरएन अमेरिकाको साधारण सदस्य बनाइएको र त्यसबापत एउटै क्रेडिट कार्डबाट ६ हजार २ सय ३० डलर तिरेको प्रमाण उजुरीकर्ताले पेश गरेका छन् ।
एउटै क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर अरुलाई पनि यसरी थानका थान सदस्य बनाएको उजुरीकर्ताको दावी छ । तर थप कागजात प्राप्त भएको छैन । एउटै क्रेडिट कार्डबाट ६ सय २३ जनालाई सदस्य बनाइएको बैंकको कागजात सार्वजानिक गरिदिएका छन् ।
लामाको बक्तब्यमा उजुरीकर्ताको हवाल दिदै एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनमा पूर्णरुपमा धँधाली भएको भनि फैसला सुनाउने कुचेष्ट गरेको देखिन्छ । लामाले डा. पौडेलविरुद्ध राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रतिशोध लिन लागेको कतिपय अमेरिकाबासी एनआरएनको बुझाई छ । उनी नेकपा एमालेका कार्यकर्ता भएको बुझिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघलाई प्रतिवेदन पठाउनुको सट्टा लामाले मिडियामार्फत् प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले घुमाउरो पारामा अध्यक्ष केशव पौडेलको बर्खातीका लागि स्थानीय अदालतमा जाने धम्की समेत दिएका छन् । वक्तब्यमा आईसीसीले पनि छानविनका लागि पहल नगरेमा उजुरीकर्ता न्यायका लागि अमेरिकी अदालतमा जाने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा एनआरएन संस्थालाई अदालतसम्म पुग्न नदिन समस्या समाधानका लागि पहल गरिएको हो उल्लेख छ ।
संस्थाको गरिमालाई बचाउनका लागि र भविष्यमा यस्ता विवाद आउने अवस्था नै सिर्जना नहोस् भनी सबै पक्षलाई समेटी एनआरएन अमेरिकालाई अझ बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ छानविनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख छ ।
क्षेत्रीय संयोजक लामाले तयार पारेको छानविन प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै
१. छानविनको थप प्रकृया अगाडि बढाउनका लागि निकट भविश्यमा आवश्यकता अनुशार छानविन कमिटि गठन गर्ने योजनासहित छानविनको प्रकृया सहज बनाउन र छानविनको प्रकृया प्रभावित हुन नदिन एनआरएन अमेरिकाको वर्तमान कार्यसमितिलाई कुनै कामकारवाही नगर्न जानकारी दिइएको छ । एनआरएन अमेरिकाको कार्यसमितिकै विघटन वा सम्पूर्ण कार्यसमितिलाई खारेज वा निलम्बन गरिएको नभई कार्यसमितिलाई औपचारिक कामकारवाही रोक्नमात्र निर्देश गरिएको हो ।
२. एनआरएन एनसीसी अमेरिकाको चुनावमा पारदर्शिताका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउदै एनआरएन आईसीसीमा परेको उजुरीपछि उजुरीकर्ताले थप प्रमाणहरु पेश गरेका छन् । थप प्रमाणमा एउटै आईपीबाट ६ वटाभन्दा धेरै मतदान भएका कागजातहरु समेटिएका छन् । ६ वटा भन्दा धेरै मतपत्रहरु एउटै खामभित्र आएको सन्दर्भमा त्यस्ता मतपत्रहरु रद्द गरिएको थियो, गणना गरिएको थिएन । तर एउटै आईपीबाट ६ वटाभन्दा धेरै मतदान भएका र त्यसलाई मान्यता दिइएका कागजातहरु उजुरीकर्ताले पेश गरेका छन् । कागजात यसैसाथ संलग्न छ ।
३. एउटै क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी ६ सय २३ जनालाई एनआरएन अमेरिकाको साधारण सदस्य बनाइएको र त्यसबापत एउटै क्रेडिट कार्डबाट ६ हजार २ सय ३० डलर तिरिएको प्रमाण उजुरीकर्ताले पेश गरेका छन् । एउटै क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर अरुलाई पनि यसरी थानका थान सदस्य बनाएको उजुरीकर्ताको दावी छ । तर थप कागजात प्राप्त भएको छैन । एउटै क्रेडिट कार्डबाट ६ सय २३ जनालाई सदस्य बनाइएको बैंकको कागजात यसैसाथ संलग्न छ ।
४. पाँच सय ७ जना मतदाताहरुका तर्फबाट अध्यक्षमा केशव पौडेललाईमात्र मतदान गरिएको छ । अन्य पदमा उठेका कुनैपनि उम्मेदवारहरुलाई मतदान गरिएको छैन । यसरी अन्यपदमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवारहरुलाई मतदान नगरी अध्यक्षमा केशव पौडेललाई मात्र मतदान गरिनु शंकास्पद भएको भन्दै उजुरीकर्ताहरुले छानविनको माग गरेका छन् । नक्कली मतदाता बनाएर उनीहरुका नाममा अरुले नै केशव पौडेलका लागि मतदान गरेको उजुरीकर्ताको दावी छ । तर त्यसबारे उजुरीकर्ताको थप प्रमाण प्राप्त भएको छैन । अध्यक्षमा केशव पौडेललाई मात्र ५ सय ७ जनालाई मतदान गरिएको कागजात यसैसाथ संलग्न छ ।
५. एउटाको भोट अर्कैले हालिदिएको सम्बन्धमा मतदाताहरुले नै कम्प्लेन गरेका छन् । क्यालिफोर्नियाका एकजना मतदाताले आफ्नो मत अरु कसैले न्युयोर्कबाट हालिदिएको उजुरी गरेका छन् भने कनेक्टिकटका अर्का मतदाताको उजुरी पनि यस्तै खालको छ । यस्ता मतदाताहरु धेरै भएको उजुरीकर्ताको दावी छ । यस सम्बन्धि कागजात यसैसाथ संलग्न छ ।
६. उजुरीकर्ताले यसअगाडि नै छानविनको माग गर्दै निर्वाचनकै बेलादेखि निर्वाचन आयोग लगायत सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरेका थिए । तर त्यसबारे छानविन गरी हालसम्म कुनै जानकारी नदिएको हुनाले उनीहरुले आईसीसी समक्ष उजुरी दिएको जानकारी दिएका छन् । यसबारे उजुरीकर्ताहरुले निर्वाचन आयोग, त्यसलगत्तै कानुन व्यवसायीमार्फत निर्वाचन आयुक्तलाई लेखिएको पत्र, त्यसपछिका अन्य उजुरीका कागजात यसैसाथ संलग्न छन् ।
७. आईसीसीले पनि छानविनका लागि पहल नगरेमा उजुरीकर्ताहरु न्यायका लागि
पदीयमर्यादा र अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरीत सोनाम लामाले सार्वजानिक गरेका ब्यक्तिग बिवरण सम्बन्धित ब्यक्तिको अनुमति बिना सार्वजानिक गर्नु अन्तराष्ट्रिय कानून विपरित अपराध मानिन्छ ।